China Ergonomic mesh Back nguSihlalo mveliso kunye nabathengisi | KUMHO
Isitulo esijikelezayo esiphezulu seofisi enentloko ehlengahlengiswayo; I-mesh upholster yaseKorea yokubuyela umva; I-3D armrest ephezulu & ezantsi, ekhohlo & ekunene, phambili nasemva; IJamani "Bock" indlela yokwenza ngokuzenzekelayo, indawo e-1 yokutshixa, ugwebu olugqithisileyo lwesikhumba kunye nelaphu lokuphotha, kunye nesihlalo sokuhambisa; Isiseko senayiloni se-350MM, Φ60MM PU caster, D120Y50 KGS iklasi 4 gaslift
Izinto: Ngwevu, Mnyama
Umbala: Ngwevu, Mnyama
Isiseko: Ngwevu, Mnyama
Isihlalo: Ngwevu, Mnyama
Ukhetho oluqinileyo lwe-GOODTONE linyathelo lokuqala kuphela ekwenzeni izinto eziphambili zamava e-ofisi yanamhlanje, ukwenzela ukuba kwenziwe izinto ezahlukeneyo ezinxulunyaniswe neqela loyilo eligqibeleleyo elinobunkunkqele obunobunkunkqele, ubugcisa obugqwesileyo ukusuka koyilo ukuya ekuphunyezweni komsebenzi wokwenza umsebenzi obalaseleyo. kunye namaqela akumgangatho uphononongo olunzima kunye nolawulo lwenkqubo nganye, kwaye ungaze uvumele nasiphi na isiphene esincinci Vumela imveliso nganye ibonise isiphumo esihle.
UMartin Ballendat udume ngesimbo sakhe esilula, esihle nesiyiliweyo, kwaye isigama sakhe esomeleleyo sizuze iimbasa ezininzi zoyilo. UMartin Ballendat, owazalelwa eBochum, eJamani ngo-1958, wafumana isidanga kuyilo lwezemizi-mveliso kwiFolkwang Design School (Essen University). Emva kokuthweswa isidanga, wabamba izikhundla ezininzi ezibalulekileyo kwifenitshala yefenitshala. Ngo-1995, waseka i-studio yakhe yoyilo iBallendant, ekhokela iqela loyilo elinetalente, edibanisa itekhnoloji, ukusebenza kunye nobugcisa kuyilo olulula.
Yakhelwe isizukulwana Z
Ngokwenkangeleko, iphula amatyathanga ezimbo zemveli kwaye isebenzise umbono omtsha woyilo ukuphucula ukwamkelwa kunye nefashoni yezitulo zeofisi, ukudala indawo encinci yeofisi ukuhlangabezana neemfuno zesizukulwana esitsha sabantu abasemsebenzini.
Ifilimu enjengefilimu ephefumlayo
Sebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu ezinobuhlobo kokusingqongileyo, amandla aphezulu okulwa iinyembezi, ukunxiba okunganyangekiyo, ukunganyangeki ngothuli kwaye kulula ukucoceka.
Ukuphakanyiswa kwentloko yokuphakamisa intloko
Uhlengahlengiso lwesibetho seesentimitha ezingamashumi amane lunokulungelelanisa ukuphakama kwentloko ngokubhekisele kubantu beendawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, ukunceda ukuxhasa ubunzima bentloko, kunye nokuphumla kwengqondo nangaliphi na ixesha lokuzilolonga ixesha elide.
Uyilo lwesinqe seBionic
Inkxaso ye-lumbar emile ngathi sisi-butterfly kufutshane ne-arc ye-lumbar spine isusa uxinzelelo kwimisipha yesinqe, ilungisa imeko yokuhlala kakubi kunye nokuphucula ukuma komzimba.
Egqithileyo USihlalo woQeqesho lweGumbi leNkomfa
Okulandelayo: Usihlalo weOfisi ye-Ergonomic yeOfisi
Usihlalo weOrgonomic Office Mesh
USihlalo weShift ojikelezayo
Mesh Seat Ergonomic Office nguSihlalo
Usihlalo we-Ofisi yoHlengahlengiso oluNgasemva
Sihlalo weOfisi enemigangatho ephezulu
USihlalo weOfisi eneNtloko
Ifashoni nguSihlalo weOfisi yeArhente ye4D